कुकुर बाँध्ने बेल्टले सुशान्तको घाँ’टी थि’चेर मा’रिएको खु’लासा - Sacho Post
कुकुर बाँध्ने बेल्टले सुशान्तको घाँ’टी थि’चेर मा’रिएको खु’लासा
२०७७ श्रावण २४, शनिबार ०१:४४ बजे
सुशान्त सिंह राजपुत आत्मह’त्या के’स सिबिआइको हातमा परेदेखि नै के’ससँग जोडिएका कैयौं कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। उनका फ्यानहरूलाई अब अन्तिम रिजल्टको पर्खाइ छ। किन र कसरी सुशान्तमाथि यो स’ब आइपर्यो? दो’षी आखिर को हो त? यत्ति जान्न सबै उत्सुक छन्।
यसैबीच सुशान्तका पूर्व असिस्टेन्ट अंकित आचार्यले सुशान्तको ह’त्या उनकै कुकुर फजको बेल्टले घाँ’टी थि’चेर गरिएको दावा गरेका छन्। यो बयान वास्तवमै भ’यानक छ। अंकितका अनुसार, उनी हर समय चौबीसै घन्टा सुशान्तको साथमै हुन्थे। उनी सुशान्तलाई राम्रोसँग चिन्दछन्, बुझ्दछन्। त्यसैले उनी सुशान्तले आत्मह’त्या गर्न सक्ने कुरा मान्दैनन्।
सुशान्तको ह’त्या उनकै पेट डग फजको बेल्टले घाँ’टी थि’चेर गरिएको दावा गर्ने अंकितले अरू धेरै कुराहरूको खुलासा गरेका छन्। भारतीय मिडिया पिंक भिल्लासँग कुराकानी गर्दै अंकित भन्दछन्, “मैले सुशान्त भैयालाई राम्रोसँग चिनेको छु। उनी यस्तो काम गर्नै सक्दैनन्। म दावाका साथ भन्छु यो ह’त्या हो। जब मान्छेले झु’न्डिएर आत्मह’त्या गर्छ, तब उसको घाँ’टीमा अङ्ग्रेजी अक्षर यु आकारको (U) धर्को बस्दछ। तर सुशान्तको के’समा यस्तो थिएन।
उनको घाँ’टीमा अङ्ग्रेजी अक्षर ओ आकारको (O) धर्का पाइएको थियो। यस्तो कसैले कसैको घाँ’टी थि’च्दा मात्र हुन्छ। आत्मह’त्या गर्दा यस्तो आकार बस्दै बस्दैन। अर्को कुरा जब कसैले आफ्नो ज्या’न लिन्छ त्यतिबेला निजको आँखा वा जिब्रो बा’हिर नि’स्किन्छ। तर सुशान्त भैयाको यस्तो भएन। मसँग त्यसबेलाका यस्ता थुप्रै फोटोहरू छन्, जसले उनको ह’त्याको व’कालत गर्छ। त्यसैले यो ह’त्या नै हो। उनको ह’त्या उनकै कुकुर फजको बेल्टले घाँटी थि’चेर गरिएको हो। अब म खुसी छु किनभने यो केस सि’बिआइको हातमा छ। म चाहन्छु, चाँडै नै ह’त्यारा प’त्ता लागोस् र उसले फाँ’सीको स’जाय पाओस्।”
भोलीदेखि यी जिल्लाहरुमा एकसाथ कर्फ्यू जारी